सन्दिप लामिछानेले गरे उत्कृष्ट बलिङ्ग ! चार ओभरमा लिए तीन विकेट ! - Hamro Nepal Cricket
नेपाली युवा स्पिनर सन्दिप लामिछानेले आफ्नो अन्तिम खेलमा चार ओभर गर्दै ३६ रन खर्चेर ३ विकेट चट्काए।
सन्दिपको अन्तिम ओभरको पहिलो बलमा बेन कटिङ्गसले कुनै रन लिन सकेनन् भने दोश्रो बलमा एक रन चोर्न सफल भए । त्यस पछिको बलमा सन्दिपले वाइड दिए भन तेश्रो, चौंथो र पाँचौं बलमा मायन्क मार्कान्डेले कुनै रन लिन सकेनन् भने अन्तिम बलमा दुई रन लिए ।
सन्दिपको तेश्रो पहिलो बलमा हार्दिक पाण्डेयाले छक्का र दोश्रो बलमा चौका प्रहार गरे । त्यस पछिका दुई बलमा पाण्डेया र रोहित शर्माले एक एक रन चोर्न सफल भए । पाँचौं बलमा पाण्डेयाले कुनै रन लिन सकेनन् भने अन्तिम बलमा एक रन लिए ।
सन्दिपले आफ्नो दोश्रो ओभरको पहिलो बलमा सात रन बनाएका काइरन पोलार्ड र चौंथो बलमा चार रन बनाएका कुर्नाल पाण्डेयाको विकेट लिए र कुल पाँच रन खर्चिएर दुई विकेट निकाल्न सफल भए ।
यस अघि सन्दिप ओपनिङ बलिङ गर्दै दिल्ली डेयरडेभिल्सलाई पहिलो ओभरमा १३ रन खर्चिएर एक विकेट लिन सफल भएका छन् ।
यादवले सन्दिपको पहिलो बलमा चौका, दोश्रो बलमा छक्का, तेश्रो बलमा दुई रन लिए भने चौंथो बलमा विकेट लिन सफल भए । पाँचौं बलमा एभ्रिन लुईसले एक रन लिए भने इशान किसानले सन्दिपको पहिलो ओभरको अन्तिम बलमा रन लिन सकेनन् । सन्दिपले पहिलो ओभरको नै चौंथो बलमा १२ रन बनाएका ओपनर सुर्य कुमार यादवलाई विजय शंकरको हातबाट क्याच थमाएका हुन् ।
सन्दिपले रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लौर बिरुद्धको खेलमा पनि ओपनिङ बलिङ गरेका थिए ।
इण्डियन प्रिमियर लिग अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा दिल्ली डेयरडेभिल्सले दिल्लीले रिसब पन्तको अर्धशतकमा मुम्बई इण्डियन्सलाई १७५ रनको लक्ष्य दिएको छ ।
आजको खेलमा पनि प्लेइङ ११ परेका सन्दिपले रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लौर बिरुद्धको आफ्नो पहिलो खेलमा २५ रन खर्चिएर एक विकेट लिएका थिए भने शुक्रवार भएको चेन्नाई बिरुद्धको दोश्रो खेलमा २१ रन खर्चिएर एक विकेट आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए । सन्दिपले चेन्नाई बिरुद्धको खेलमा स्टाईलिस प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका थिए ।
cricketingnepal.com बाट उद्दृत !
उदाउदा तारा सन्दिप लामिछाने भोलि स्वदेश फर्कदै !!!